Maonero eHurumende yeAmerica Mukudyidzana neChina.
Nyamavhuvhu 12, 2020
Kwemakore akawanda, hurumende yeAmerica yange ichikumbira China mune zvakanaka kuti imire mabasa ehutsotsi, kumbunyikidza uye kusora muAmerica.
Asi kwemakore ose aya China yange ichiramba kuteerera. Nenyaya yekuita hunhinhi uku, America yakazomanikidzwa kuvhara muzinda weChina kuHouston, Texas mushure mekunge China yayedza kutora zvisiri pamutemo hunyanzvi hwezvekugadzia mishonga uye kuda kupa chiokomuhomwe kune vanhu makumi mashanu vanoshanda pamakambani anogadzira mishonga aya kuti vapihwe magwaro akakosha ekugadzira mishonga nehumwe humhizha.
China iri kuyedzawo kutyisidzira zvizvarwa zvenyika iyi zviri muAmerica zvinopikisa kuti zvidzokere kumusha.
Zvakaitwa neChina kuHouston zvakapfurikidza zvakanyanya zvakasiya hurumende yeAmerica isina chimwe chekuita kunze kwekuvhara muzinda uyu. Iri rimwe danho rakaomarara ratorwa neAmerica kudzivisa China iyo yopinda nemwenje mudziva.
Kwemakore, vamiriri veChina vange vachibatwa zvakanaka neAmerica asi ivo vachibata vamiriri veAmerica munyika yavo neseri kweruoko. Izvi handi zvinhu zvakanaka.
Asi hamusi muAmerica chete umo vamiriri veChina vanozvidza nyika inovaremekedza. Kubiwa kwemagwaro enjere neChina rave dambudziko rakomba pasi rose.
Mazuva mashoma adarika matare emuAmerica akawana zvimwe zvizvarwa zvekuChina zviviri Li Xiaoyu naDong Jiazhi zviine mhosva yekusora makambani emuAmerica nekuba zvakakosha pamacomputer.
Vaviri ava vakange vapedza makore gumi vachisora nekuba magwaro akakosha ane humhizha hwepamusoro hwemaindustry kunyika dzinosanganisira United States, Australia, Belgium, Germany, Japan, Lithuania, the Netherlands, Spain, South Korea, Sweden, ne United Kingdom.
Zvose izvi zvinoratidza kuti China inodya zvevapfupi nekureba mukuda kwayo kuti ive nyika ine hupfumi hwakasimba pasi rose.
Maonero eHurumende yeAmerica Pane Zviri Kuitika kuChina